महिला डाक्टरको पहिलो अनुभव : उपचारमा आएका पुरुषको लिङ्ग देख्दा लाज लाग्छ हेर्नुहोस भिडियो सहित ! – ताजा समाचार
महिला डाक्टरको पहिलो अनुभव : उपचारमा आएका पुरुषको लिङ्ग देख्दा लाज लाग्छ हेर्नुहोस भिडियो सहित !
काठमाडौँ । यौ*न रोग तथा प्रस्तुती गराउने महिलाले उपचारको लागि महिला डक्टर नै पाए उचित हुन्छ । त्यस्तै यौ*न रोग सम्बन्धी समस्या लिएर गएका पुरुषको लागि उपचार गर्ने पुरुष डक्टर भए उपचारमा सहज हुन्छ । तर सबै स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो कुरा सम्भव हुँदैन् ।असहज परिस्थिती आएपनि चिकित्सकले गर्नै पर्छ र बिरामी उपचारको लागि जानै पर्छ । विपरित लि*ङ्गीमा यस्तो उपचार गर्न कठिन भएपनि गर्नै पर्ने हुँदा बिरामी पनि लजाउँनु हुँदैन् र चिकित्सकले पनि यस्तो कार्यमा लाज मान्नु हुँदैन् ।
यस्तै यौ*न तथा प्रस्तुती रोग विशेषज्ञ डक्टर सृजना शर्मा पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतलम पोखरामा कार्यरत रहेकी छन् । उनले आफुलाई सुरुमा पु*रुषहरुको लि*ङ्ग देख्दा लाज लागेको खुलासा गरेकी छन् । युवा अवस्थामा यो रोगको बारेमा सिकाइ भइरहेको अवस्थामा यस्तो समस्या थुप्रै झेलेको बताएकी छन् । तर अब सिक्ने अवस्थामा होस या काम गर्ने क्रममा होस् यस्तो कुरा देखेर लाज मान्नु हुँदैन् । सिक्ने बेलामा सहज तरिकाले सिकेको छ भने काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।
Video From Anusandhan Online Youtube Channel
म यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर हो म कहाँ पुरुष बिरामी थुप्रै आउनुहुन्छ । मैले लाज मानेर त भएन । मैले जे जानेको छु त्यो सिकाउनु पन पर्छ र उपचार पनि गर्नुपर्छ । विरामीहरु पनि उपचारमा आउँदा लाज मान्नु हुँदैन् । पुरुष वा महिला डाक्टर भएको कारण भन्न ला*ज मान्यो भने समस्या जस्ताको तेस्तै हुन्छ र सधै कष्ट सहि रहनु पर्ने हुँदा उपचार गराउँदा लाज भन्ने कुरालाई आत्मैदेखि टाढा राखेर समस्याहरु बताउनुपर्छ र उपचार गर्नुपर्छ । महिला पुरुषहरु डाक्टरकै कारण वा भन्न ला*ज मानेकै कारण उपचार गराउन अस्पताल सम्म पुग्दैनन् । यसैले सचेतना बढाउन यस्ता सामाग्री सेयर गरिदिनुहोला ।- हेर्नुहोस भिडियो
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : September 5th, 2019,